Misokatra ve sa mihidy ny fizahantany? Ny lesoka sa ny tsy fahombiazany?
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Misokatra ve sa mihidy ny fizahantany? Ny lesoka sa ny tsy fahombiazany?
Vaovao Mafana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • LGBTQ • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Oktobra 5, 2020
Azo atao ve ny fanarenana?
Ireo lehilahy sy vehivavy voafidy sy voatendry miasa any Washington, DC, dia mandany ny ankamaroan'ny fotoan'izy ireo amin'ny fifampifehezana rantsan-tànana, amin'ny famoronana korontana, tsy fitovian-kevitra, fikorontanana ary loza amin'ny farany, manimba (angamba manimba) ny harinkarenan'izao tontolo izao. Iray amin'ireo very be indrindra amin'ity "Hoy izy. Nilaza izy fa ny fiasco dia ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny mpiara-miombon'antoka aminy, anisan'izany ny (saingy tsy ferana amin'ny) toeran-kaleha, hotely sy fitsangatsanganana / fitaterana, trano fisakafoanana, mpiasan'ny fizahan-tany, mpandraharaha fizahan-tany, kianja ary ivon-toeran'ny fihaonambe.
Hatramin'ny 2 Oktobra 2020, dia 34,567,664 no voalaza fa voan'ny Coronavirus nahitana olona 1,028,990 maty noho io aretina io ( www.worldometers.info/coronavirus/ ). Taorian'ny sivy volana mahery nanaiky sy niatrika an'io areti-mifindra io, dia tsy manakaiky ny famolavolana ity virus ity intsony ny mpitarika raha vao tamin'ny fotoana voalohany nahitana azy. Fotoana tokony hampiatoana ny fiantsoana anarana sy ny fanomezan-tsiny ary fotoana mety indrindra hamelezana ireo mpahay siansa, hiresahana ny aretina momba ny inona izany, hijerena ny zava-dratsy naterak'izany, ary hamolavola / hampihatra vahaolana hahafahan'ny izao tontolo izao manao avereno indray, mamorona làlana vaovao mankany amin'ny fanarenana toekarena.
COVID-19 dia nikorontana na ny lafiny fitakiana sy ny famatsiana ny fizahan-tany momba ny fizahantany (GVC). Tsy toy ny loza voajanahary teo aloha, efa misy ny fahafaha-manao manerantany (izany hoe hotely, trano fisakafoanana, kianja filalaovana, seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina, saingy tsy ampiasaina intsony, manome fotoana hahazoana sitrana haingana rehefa lasa tsy miandany ilay virus.
Ny fanadihadihana ireo loza voajanahary taloha, nanomboka tamin'ny horohoron-tany tany Japon ka hatramin'ny SARS tany Chine, Hong Kong, Singapore ary Taiwan, dia nahita fa azo sitrana haingana raha misy ny politika famonoana mahery vaika ary misy ny malefaka amin'ny rojom-bidy manerantany (GVC). Ny Banky Iraisam-pirenena (2020) dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny politikam-panalefahana aloha mandritra ny dingana voalohany amin'ny areti-mifindra satria ny vidin-javatra mifandraika amin'ny krizy dia hitombo be rehefa hiparitaka manerana ny toerana maro ny virus - izay mahatsapa ny hatairana tampoka avokoa. Ny fandaniana sy ny loza mety hitranga mifandraika amin'ny areti-mifindra dia mitaky fandrindrana eo an-toerana, miaraka amin'ireo tanàna / fanjakana akaiky ary iraisam-pirenena amin'ireo firenena, mba hanalefahana ny fikorontanan'ny toekarena miandry ny tsy fananan'asa, ny fatiantoka orinasa, ny fahalemen'ny tsena ara-bola, ny fotodrafitrasa mirodana ary ny rafitra fitsaboana lehibe.
Ny fanadihadian'ny Banky Iraisam-pirenena (2020) dia naminavina fa ny GDP manerantany dia hidina mihoatra ny 2 isan-jato amin'ny taona 2020. Ny Vondrona Iraisam-pirenena momba ny asa (2020, ILO) dia naminavina fa ny COVID-19 dia hitarika fihenan'ny 6.7 isan-jato amin'ny ora fiasana, izay mitovy amin'ny Mpiasa manontolo andro 195 tapitrisa manerantany, ao anatin'izany ny mpiasa an-tsitrapo 125 tapitrisa any Azia sy Pasifika. Amin'ny ankapobeny, ny fepetra fanalavirana sosialy dia misy fiatraikany amin'ny mpiasa 2.7 miliara, izay maneho 81 isan-jaton'ny mpiasa manerantany.
Fahasalamana mifandray amin'ny toekarena
Miaina COVID-19 isika amin'ny teboka roa - ny iray dia mifandraika amin'ny fahasalaman'ny olombelona ary ny iray hafa dia manaitra ny toekarena (miaraka amin'ny loza ateraky ny krizy ara-bola). Izany rehetra izany dia mitranga noho ny valin'ny politika mahantra (na tsy misy) izay nanamboatra ny làlana mankany amin'ny fikorontanana mavesatra ao amin'ny GVC amin'ny lafiny famatsiana sy ny fangatahana amin'ny famokarana sy ny fanjifana.
Mametraha Thumb ao Dike
Ny World Travel and Tourism Council (WTTC) (wttc.org/COVID-19/Government-Hub) dia manentana ny governemanta hanohana ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany amin'ny:
1. Fiarovana ny fiveloman'ny mpiasa, fanampiana ara-bola sy fiarovana ny vola miditra,
2. Fanohanana ara-bola amin'ny endrika indram-bola tsy misy zanabola amin'ny orinasa manerantany, kely sy salantsalany ho famporisihana hisorohana ny fianjerany sy ny fanemorana ny volan'ny governemanta sy ny fitakiana ara-bola an'ireo sehatra ireo mandritra ny 12 volana manaraka.
3. Fandraisana an-tanana ny vola sy vola hanohanana ireo mpandray anjara amin'ny indostria rehetra.
4. Gloria Guevara, ny filoha lefitry ny WTTC, tamin'ny taratasy nalefany tamin'ny lohan'ny governemanta, dia nangataka mpitondra amn'izao tontolo izao hamoaka ireo indostria, "hiala amin'ny krizy." Raha namintina ny zava-misy ankehitriny izy dia nilaza hoe: “Tonga amin'ny dingana ilana fepetra maika isika…. Mila mihoatra ny politika isika ary mametraka fivelomana an-tapitrisany… eo aloha sy afovoany. Tsy vahaolana mimari-droa na safidy eo amin'ny fahasalamana ankilany izany, sy ny asa, ny toekarena ary ny dia an-daniny. Afaka mandroso fatratra amin'ireo lafiny rehetra ireo isika raha manaraka ny torohevitra omen'ny manam-pahaizana avy amin'ny siansa ary mianatra amin'ny lasa sy ny zavatra niainana tsara nataon'ny hafa. ” Hitan'i Guevara fa, "ny mpitondra… dia tsy maintsy miara-miasa ary manao laharam-pahamehana ny famonjena izao tontolo izao amin'ity krizy mbola tsy nisy toa azy ity tamin'ny alàlan'ny fihetsika… amin'ny fomba mifandrindra mba hamerenana asa maherin'ny 120 tapitrisa…" rafitra iraisampirenena sy mpitarika iraisana:
a. Ny sarontava dia tsy maintsy atao amin'ny fomba fitaterana rehetra mandritra ny dian'ny mpandeha, miampy ny toerana anatiny sy ny toerana misy fameperana voafetra ka miteraka fifandraisana akaiky sy fanalavirana ara-batana. Izany dia mety hampihena ny fiparitahan'ny hatramin'ny 92 isan-jato.
b. Fitsapana sy fifampiresahana. Ny governemanta dia tsy maintsy mampiasa vola ary miombon-kevitra amin'ny fanandramana be dia be, haingana ary azo antoka ao anatin'ny 90 minitra, amin'ny vidiny ambany, alohan'ny fiainganana sy / na aorian'ny fahatongavany, tohanan'ny fanandramana mahomby sy nifanarahana momba ny fitaovana fikarohana sy ny paikady. Ny fitsapana (s) dia tokony haverina ao anatin'ny 5 andro ary ampiasaina hanoloana ny quarantine lamba firakotra, hampihena ny fiatraikany ratsy amin'ny asa sy ny toekarena.
c. Hamafiso ny fomba fiasa manerantany ary hamaritana ny fepetra hanarenana ny fahatokisan'ny mpizahatany, hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny traikefa amin'ny dia sy hampihena ny risika amin'ny aretina.
Ny WTTC dia nanapa-kevitra fa na dia ny famerenana ny dia kely aza dia mety hanana tombony ara-toekarena goavana, hamerenana asa an'arivony ary hanome fanampiana ny sehatry ny asa aman-draharaha mitolona, ​​miteraka harin-karena faobe ho an'ny toekarena voan'ny areti-mandringana.
Fanampiana ara-bola. Tsy ampy mihitsy
Mba hialana amin'ny hemorrhaging ara-toekarena nateraky ny COVID-19, dia nametraka fonosana fanampiana lehibe ny governemanta sasany. Ny Minisiteran'ny Vola sinoa dia nampiditra 16 tapitrisa dolara tao amin'ny fantsona ara-toekarena ary 261 miliara dolara ho an'ny fifamatoran'ny governemanta vaovao hanohanana ireo governemanta any amin'ny faritany. Ny senatera amerikana dia nandany fonosana fanampiana 2.2 trillion $. Ny firenena UE, Aostralia ary ny firenena Aziatika Atsinanana dia nampiditra fanampiana ara-bola ihany koa. Ny Tahirim-bola iraisam-pirenena dia nanome famatsiam-bola ho an'ireo firenena IMF ambany fidiram-bola toa an'i Maraoka, Tonizia, Madagascar, Rwanda, Guinea, Gabon ary Senegal, miaraka amin'i Ghana nahazo ny vola mitentina 1 miliara (aprily 2020; iclg.com).
Tamin'ny volana aogositra 2020, McKinsey (mckinsey.com) dia nandinika fonosana fanentanana nanerana ny toe-karena 24 (mitentina $ 100 miliara natokana mivantana ho an'ny sehatry ny fizahantany; efa ho $ 300 miliara miaraka amin'ny fifantohana mavesatry ny fizahan-tany). Ireo loharanom-pahavitrihana dia nahitana antokon'olona marobe sy sampan-draharaham-panjakana misy firenena vitsivitsy izay manome fomba fijery iraisana amin'ny mpahazo tombontsoa sy resy. Tamin'ny fanadihadiana ny fahombiazan'ny valintenin'ny sehatra ho an'ny daholobe dia hitan'i McKinsey fa ny roa ampahatelon'ny mpandray anjara amin'ny fizahan-tany dia tsy nahalala ny fepetra noraisin'ny governemanta na nahatsapa fa tsy nisy fiantraikany ampy.
Hitan'i McKinsey fa ny ankamaroan'ny $ 100 miliara dia natao tamin'ny endrika fanomezana, fanampiana ny trosa ary fanampiana an'ireo orinasa kely sy salantsalany (SME) ary ireo kaompaniam-pitaterana. Nanolotra fanomezana $ 10,000 isaky ny SME i Nouvelle Zélande hanefana ny karama; Singapore dia nanolotra vola 8 isan-jato amin'ny karama lehibe isam-bolana an'ny mpiasa eo an-toerana; Nofoanan'i Japon ny trosan'ny orinasa kely izay nilatsaka mihoatra ny 20 isan-jato ny vola miditra; Alemana dia namela orinasa hampiasa programa fizarana asa tohanan'ny fanjakana mandritry ny 6 volana ary ny governemanta dia nanolotra tahan'ny fanoloana vola 60%.
Raha ny fikarohana nataon'ny McKinsey dia haharitra 4-7 taona vao hiverina any amin'ny ambaratonga 2019 ny filan'ny fizahan-tany; noho izany, ny fahaiza-manao be loatra dia ny mahazatra vaovao ao anatin'ny antonony. Ny teti-bola maharitra ela amin'ny fangatahana ambany dia mitaky teti-bola vaovao. Ny safidy dia misy: fampandrosoana ny rafitra fidiram-bola. Hotely mifaninana amin'ny tsena mitovy amin'ny toerana eo an-toerana mitovy amin'ny fidiram-bola sy fatiantoka mandritra ny fihenan'ny fahaizany. Io dia ahafahan'ny trano fandraisam-bahiny manatsara ny vidiny miovaova ary mampihena ny filàna fanelanelanana ataon'ny governemanta. Ny trano fandraisam-bahiny tsy miasa dia afaka mandray vola mandrisika sy mampiasa ny vola hanamboarana ny fananan'izy ireo na ho an'ny fampiasam-bola hafa izay hanatsara ny fahatsaran'ny toerana aleha. Ny governemanta dia hanome fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny kaonty fanaraha-maso sy kaonty.
Raha tsy izany, ny tahirim-bolam-panjakana tohanan'ny governemanta dia azo omena hampiasa renivohitra tsy miankina mba hahatafavoaka velona ny SME mifandraika amin'ny fizahantany Izany dia hampihena ny risika ankapobeny ho an'ny mpampiasa vola ary hampivelatra ny fomba fanombanana manara-penitra hisorohana ny fizotry ny fahazotoana maharitra eo amin'ny fananana tsirairay.
Ny American Hotel and Lodging Association (AHLA) dia nanentana ireo olom-boafidy handalo ny fepetra fanampiana alohan'ny hiaingan'izy ireo amin'ny fialan-tsasatra, alohan'ny fifidianana amin'ny volana novambra. Raha tsy misy fonosana manentana ny toe-karena dia mety hivadika fihodinan-dresaka roa sosona. Ho fanampin'ny fatiantoka maha-olombelona sy ara-bola mahamenatra ny indostrian'ny hotely, mpanamory fiaramanidina an'arivony maro, mpikarakara sidina, mpiasan'ny vavahady ary mpiasan'ny seranam-piaramanidina hafa no nodorana na voaroaka. Chip Rogers, filoha sady tale jeneralin'ny AHLA dia nanambara fa, "asa an-tapitrisany sy fiveloman'ireo olona nanangana orinasa kelin'izy ireo nandritra ny am-polony taona maro, malazo fotsiny satria tsy nanao na inona na inona ny Kongresy."
Morphs momba ny indostria
Hanao ahoana ny fiainana aorian'ny COVID-19 ho an'ireo sehatra marobe amin'ny indostrian'ny fizahantany? Ny ankamaroan'ny mpikaroka sy ny mpitarika indostria dia manaiky fa tsy hitovy amin'ny 2019 (na aloha). Ny fahombiazana amin'ny ho avy dia miankina amin'ny fandraisana ny nomerika, fampiasana teknolojia vaovao ary fanaraha-maso tsara ny fiovan'ny fitondrantenan'ny mpanjifa.
Ireo sehatra, izay miavaka amin'ny fifandraisan'olombelona, ​​dia hosoloina fanandramana tsy misy mikasika izay misy robot sy traikefa mifantoka amin'ny haitao hafa. Ny fitohanana dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fananganana modely ara-barotra mateza sy miovaova ka miteraka fivelarana ara-toekarena, miampy fiadanam-piarahamonina sy tontolo iainana mandritra ny fotoana maharitra.
Fiovana amin'ny fitondran-tena ho an'ny mpanjifa
Manomboka amin'ny hidin-trano, ny quarantine sy ny zaza miverina any an-trano "fianakaviana", hatramin'ny ahiahy momba ny toekarena, asa manokana, miampy fikorontanana ara-pahasalamana sy fahasalamana, manjifa ny fandaniam-bolan'ny mpanjifa sy ny fitondran-tenany. Ny fironana dia manondro fa misy faniriana mafy ny fitsangatsanganana an-tokantrano miaraka amin'ny toerana aleha amin'ny alàlan'ny fiara izay ampiarahina amin'ny fahalianana bebe kokoa amin'ny habaka malalaka misy rivotra madio sy trano tsy miankina. Ireo mpitsangatsangana mety dia maniry ny hisoroka ny toeram-ponenana sy ny hetsika avo lenta, ary tsy te hifangaro amin'ny olon-tsy fantatra (indrindra amin'ny fitsangantsanganana sy sidina lavitra).
Na dia misy aza ny faniriana ny fialan-tsasatra mavitrika amin'ny fanatanjahan-tena (izany hoe ny fitsangatsangana an-tongotra, bisikileta), dia misy fihenan'ny fanjifana miaraka amin'ny fitomboan'ny fitsitsiana, mety hitarika fianjerana amin'ny fandaniana fialan-tsasatra feno fahendrena. Te-ho hitan'ny mpanjifa (amin'ny alàlan'ny sary an-tserasera) ho tompon'andraikitra sy azo antoka izy ireo, miaraka amin'ny drafitry ny fitsangatsanganana amin'ny alàlan'ny mason'ny "inona no azo antoka" fa tsy "izay malaza." Misy fahatsiarovan-tena matanjaka momba ny COVID-19 sy ny fiantraikany amin'ny orinasa kely sy ny fiveloman'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana izay mitarika amin'ny fandaniana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny SME mba hanohanana ireo orinasa eo an-toerana (sns-corporation.org).
Mamaly ny COVID-19 ny indostria
Sif Gustavsson, Tale teo aloha, mitsidika an'i Islandy USA; Nanambara ny tale jeneralin'ny Islandy Iceland Cool fa, “Ny fizahantany no indostria lehibe indrindra eto Islandy.” Tamin'ny taona 2019, mpitsidika vahiny maherin'ny 2 tapitrisa no nitsidika an'i Islandy niaraka tamin'ny 2 tapitrisa tonga tamin'ny sidina namakivaky ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Keflavik, izay maneho ny 98.7 isan-jaton'ny mpitsidika rehetra. Noho ny areti-mandringana, ny isan'ireo mpandeha tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Keflavik, hatramin'ny Jona 2020, dia nihena 96 isan-jato. Ny fitsidihan'ny hotely alina dia nihena 79 isan-jato tamin'ny volana Jona, ary 87 isan-jato tamin'ny Mey (grapevine.is).
Mba hitazomana ny indostrian'ny fizahan-tany dia nanondro vitsivitsy tamin'ireo singa ao amin'ny Package Stimulus Islandy i Gustavsson:
1. Manafoana ny haba amin'ny trano fandraisam-bahiny
2. Mandrakotra ny tsy fananan'asa tapa-potoana hatramin'ny 75 isan-jato
3. Manome famatsiam-bola ho an'ireo orinasan-dia
4. Voucher momba ny dia (35 $) natolotra ho an'ny olom-pirenena rehetra tamin'ny volana martsa mba handrisihana ny dia amin'ny fahavaratra eo an-toerana
5. Mahatonga ny fampiharana ny fandefasana fifandraisana ho an'ny mponina sy ny mpitsidika
6. Mamolavola drafitra ho an'ny post-COVID-19 amin'ny alàlan'ny simposium iraisampirenena (30 septambra) karakarain'ny praiminisitra Islandy.
Amin'izao fotoana izao, ny sisintanin'i Islandy dia misokatra hisafidy ireo fanjakana EU sy Schengen ary Kanada; na izany aza, misy fameperana; Ireo mpizahatany izay manitsakitsaka ny fameperana ny quarantine (fisavana 2 COVID-19; quarantine 5-6 andro), dia voasazy 1800 $. Raha mikasa ny handehandeha any Islandy ianao dia avereno jerena ny tranokala COVID-19 ofisialy raha mila vaovao farany ( www.covid.is/english ).
Kim Gauthier, filoha lefitra zokiny, fitantanana fananana, hotelAVE ary filohan'ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fandraisam-bahiny dia mahita fa ny American Hotel Lodging Association, "dia eo amin'ny laharana voalohany misolo vava ny indostria." Ny fikambanana, "dia nanangana ny Safe Stay vao haingana, tetik'asa iray manerana ny indostria mba hanampy amin'ny fanabeazana ny besinimaro momba ny fihetsika noraisina tao anatin'ny indostrian'ny hotely." Gauthier dia nanambara fa ny fikambanana dia, "fitaovana lehibe amin'ny fanitarana ny fe-potoana nahitana ny PPP hatramin'ny 8-24 herinandro… .ary," modely fakan-tahaka ho an'ny indostria. "
Gauthier dia nanoro hevitra ny indostria hijery faritra vaovao hisian'ny fitomboana, anisan'izany ny "flexcations na sekoly" dia "natao manokana ho an'ny toeram-pialamboly lafo vidy izay avo ny fandraisan'anjaran'ny vahiny ary mamela azy ireo hamorona ny tany malalaka." Mikasika ireo fironana hafa, hoy i Gauthier, "ny famandrihana fialamboly maharitra sy ny fangatahana efitrano misy efitrano fandraisam-bahiny maro satria ny vahiny dia mitady hamadika ny vakansy ho trano vonjimaika." Manamarika ny fitomboan'ny fampiasana ny haitao, Gauthier mitanisa ny “traikefa tsy misy mikasika toy ny lakile nomerika sy ny chat chat”, hahatonga ny vahiny hahatsiaro ho tsy milamina. Hitany ihany koa fa manontany momba ny "fiovan'ny fizotran'ny fanadiovana sy ny faharetan'ny fanandramana mpiara-miasa" ny vahiny, ary manery ny "fenitra ambony sy ny fari-pahaizana ambony", "tsy ampy ny milaza amin'ny vahiny; mila fanamarinana izy ireo. ”
Bruce Rosenberg, filohan'ny amerikanina ary tompon'andraikitra mpiandraikitra ao amin'ny HotelPlanner, izay nanaiky ny fihoaran'ny COVID-19 ny indostrian'ny fizahan-tany dia nanapa-kevitra fa miova ny toetran'ny dia. "Misy ara-dalàna vaovao mipoitra izay misy ny fangatahana ambany kokoa," ampiarahana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana mifandraika amin'ny filàna mampihena ny taha raha te hitarika ny fangatahana. Miaraka amin'ny COVID-19 dia misy, "ny fahatsapana fa ny fitsangatsanganana dia miteraka fanahiana sy fihenjanana izay mihoatra ny filàna miala sasatra, miverina ary miaina traikefa vaovao." Rosenberg dia miatrika fanamby hafa amin'ny fitantanana, “ny fiatrehana ireo fameperana COVID isan-karazany amin'ny federaly, fanjakana ary eo an-toerana ho an'ireo mpandraharaha hotely. Ho an'ireo mpanjifa / mpitsangatsangana manara-maso ny tahan'ny aretina COVID any amin'ny tanàna iray manokana, ny fitakiana quarantine sy ny fitsipika hafa dia mampitombo ny fahasahiranana amin'ny dia. "
Rosenberg dia be fanantenana amin'ny ho avy, mahita fa te-hivezivezy ny olona ary misy ny fangatahana fialantsasatra miaraka amin'ny fitsidihana namana sy fianakaviana, miampy ny faniriana hanao fitsangatsanganana vondrona amin'ny hetsika manokana toy ny fifaninanan'ny tanora. Hitan'i Rosenberg fa, "Mahatsapa ny olona fa manan-katao ny dia ary te-hampiasa izany fahalalahana izany."
Amin'ny voalohany dia ho eo an-toerana ny fangatahana dia miaraka amin'ny "fitsangatsanganana miverina tsindraindray." Ho an'ny fitsangatsanganana an-trano dia nanoro hevitra i Rosenberg mba hamorona tranokala izay miasa ho trano fanadiovana ho an'ny fampahalalana marina ao anatin'izany ny fitsipiky ny governemanta (tanàna, fanjakan'ny fanjakana ary federaly), dingana natombok'ireo mpamatsy vola manokana mba hampihenana sy hitantanana ny risika, ny fanavaozana ny tahan'ny aretina, ny mombamomba ireo toerana misy ny fiarovana amin'ny teboka angona azo refesina sy ny fipoahan'ny tranga hafa (ie, gripa, sery) ary angona avy amin'ny mpamatsy ny hetsika ataon'ny tsirairay mba hiantohana ny fiarovana sy filaminana. Araka ny voalazan'i Rosenberg, ny tranokala mpivarotra rehetra dia tokony ahitana zava-misy, "notendren'ny governemanta ka… eo aloha sy eo afovoany ny vaovao."
Greg Tipsord, tale jeneralin'ny ViaClean Technologies, dia manome sosokevitra ny fifantohan'ny indostria amin'ny "fitakiana ny fomba fanadiovana sy fanadiovana bebe kokoa. Talohan'ny COVID-19, paikady ambadiky ny sehatra ny fanadiovana. Ankehitriny, lohalaharana ny fomba fanadiovana… rehefa mieritreritra ny hamandrika fitsangatsanganana ny mpandeha. ” Nanoro hevitra i Tipord fa ny hôtely, "hampiasa teknolojia nohatsaraina," ary "hangarahara amin'ny vokatra ampiasaina hiantohana… fahasalamana sy fahasalamana…" Nomarihiny fa ny trano fandraisam-bahiny sy fikambananam-pitetezana dia, "hahita famandrihana sy fidiram-bola betsaka kokoa… rehefa mahatsiaro ho voaro ianao… "
Tipord ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, miresaka ireo fanamby atrehin'izy ireo rehefa manandrana mameno seza izy ireo, miresaka amin'ny zava-misy fa eo amin'ireo mpanjifa, “maro no matahotra ny ho eny amin'ny habakabaka feno olona.” Nanondro ny indostrian'ny jet tsy miankina izy ary nanamarika fa mitombo ny fangatahana noho ny, "fomba fiasa nohatsaraina sy fitandremana fiarovana ..." Nambarany fa, "Jet Linx dia nanangana ny Rafitra Bioprotectus hanadiovana ny fiaramanidina sy ny terminal hatramin'ny 90 andro," ary mahatonga ny fahadiovan'ny tananao ho an'ny mpiasa sy ny mpanjifa rehetra. Noho ireo kaonty fanadiovana dia nitatitra ny fitomboan'ny famandrihan-toerana ny orinasa. ” Hitan'i Tipord fa, "Te-hivoaka any sy hivezivezy ny olona, ​​mila mahatsiaro tena ho voaro izy ireo raha manao izany."
Ao amin'ny "Before Time" (talohan'ny COVID) dia nandeha tamin'ny làlan-kaleha mahomby ny indostria ary tsy nisy famantarana na famantarana milaza fa tsy hitohy ny fitomboana. Mampalahelo fa ny COVID-19 dia namindra ny indostria ho lasa refy vaovao. Hanao ahoana ny ho avy? Toa tsy mahafinaritra ny zava-misy satria mety tsy hisokatra mandritra ny volana maro ny sisintanin'ny firenena ka mametra na mampiato ny fihetsiky ny olona. Hihena ny dia ataon'ny orinasa satria lasa “ara-dalàna” ny fivoriana amin'ny Internet. Ny ankamaroan'ny orinasa iraisam-pirenena dia tsy mankato ny fitsangatsanganana ho an'ny mpiasan'izy ireo na dia amin'ny fotoana hampihena ny isan'ny mpiasa miverina any am-piasana aza. Ny tsenan'ny MICE dia comatose ary hijanona toy izany amin'ny ho avy azo jerena. Ny hetsika eran-tany (fihaonambe, fandefasana, fety, seminera, fivoriambe, hetsika ara-panatanjahantena) dia mety hanomboka miadana tsikelikely (amin'ny kinova kely - lite), amin'ny tapaky ny taona 2021 raha / rehefa misy vaksinina mety.
1. Fahadiovana sy fahadiovana. Fepetra vaovao amin'ny fanadiovana, fehezin'ny governemanta.
2. Fahasalamana. Ny fanamarinana dia mety tsy maintsy atao any amin'ny seranam-piaramanidina, alohan'ny hidirana amin'ny trano fandraisam-bahiny na trano fisakafoanana, miaraka amin'ny fanaraha-maso tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso elektronika. Ny fidirana amin'ny toeram-pitsaboana, ary ny teknolojia telemedicine dia tokony hasongadina amin'ny fampiroboroboana ny toerana sy ny hotely.
3. Marika. Ireo orinasa mifandraika amin'ny fenitra avo lenta momba ny fahasalamana sy ny fahadiovana dia handresy satria ny toetra tena ilaina indrindra dia miova manomboka amin'ny toerana sy ny endriny mankany amin'ny fiarovana sy filaminana.
4. Sarobidy azo jerena. Ny vahiny dia tsy maintsy afaka mamantatra mazava ny rohy mampifandray ny kalitao sy ny vidiny, apetraka amin'ny sehatra manokana ary afaka hamarinina.
Angamba, Maya Angelou, ilay poeta amerikanina, mpampahatsiaro ary mpiaro ny zon'olombelona no mpitari-dalana tsara indrindra ho antsika.
Maya Angelou, Fantatro ny antony fihiran'ilay vorona voafefy